‘आन्तरिक मामिलामा राजदूतको प्रवेशले हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि आशङ्का पैदा गर्‍यो’ | Ratopati
‘आन्तरिक मामिलामा राजदूतको प्रवेशले हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि आशङ्का पैदा गर्‍यो’
प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षणमा अप्ठ्यारो पार्दै जानुभयो : पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँगको अन्तरवार्ता
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । मुलुकमा केही दिनयता आन्तरिक तथा भू–राजनीतिक बहस प्राथमिकता छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको सत्ता सङ्घर्ष र त्यसलाई विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुने फन्डाले बसह निम्याएको छ ।
कोरोना महामारीकै बीच मुलुकमा गर्मिंदो राजनीतिक माहोलमा कूटनीतिक मामिलाको विषय पनि प्रवेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र चिनियाँ राजदूतको अस्वाभाविक सक्रियता त्यसको केन्द्रमा छ । यी यस्तै विषयको सेरोफेरोमा प्रमुख प्रतिपक्षीनेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :
सरकारका गतिविधि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति भू–राजनीतिक बसहको विषयका रूपमा अगाडि आएको पाइन्छ । यसले मुलुकको कूटनीतिक मामिलामा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?
अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीजी प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ । त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि त्यसले मद्दत गर्दैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो जमिन भएको प्रमाण छ । त्यसमा सर्वसम्मत निर्णय पनि भयो । तर त्योभन्दा बाहेकका विषयमा उहाँले दिइराख्नुभएको अभिव्यक्तिले नेपाललाई हित गर्दैन । सीमाको विषयमा हामीले लिएको उद्देश्यलाई पनि उहाँका अभिव्यक्तिले कठिन बनाउँछ । पछिल्लो दिनमा अयोध्याको विषय आयो । त्योभन्दा पहिले उहाँले तिक्तापूर्ण गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो । हाम्रो जस्तो देशले राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वार्थको रक्षा गर्ने कूटनीतिक बाटोबाटै हो ।
भाषामा नरमता र प्रस्तुतिमा स्पष्टता, तर्कसङ्गत र तथ्यगत बाटो रोज्नुपर्छ । हामी एउटा मित्रराष्ट्र हौँ । हामीले तपार्इंलाई सहयोग गरेका छौँ । नेपालीले तपाईंंको सीमा रक्षा गरेका छन् । हाम्रो तथ्यगत कुराहरु तपाईंंहरुले सुन्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुँदा हामी उद्देश्यको नजिक पुग्छौँ ।
तर सरकार भूराजनीतिक जटिलता सिर्जना गर्नतिर लागेको आरोप छ । यसलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ ?
हामी भू–राजनीतिक जटिलतामा छौँ । दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा छौँ । आउने शताब्दी भनेको एशिया शताब्दी हो भनेर संसारले भनिरहेको अवस्था छ । त्यो भनेको सबै हिसाबले विश्व चीन र भारत काबुमा रहने कुरा हो । त्यसैले हामीले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा सुजबुजपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ । साथै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका विषयमा सम्झौता नगर्ने कुरामा अत्यन्त चनाखो हुनुपर्छ ।
हामीले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम नगर्ने बाटो नै रोज्दा हामी सफल हुन्छौँ । तर प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारो पार्दै गएको महसुस गरेका छौँ ।
सबै देशको कुरा हो । अहिले चिनियाँ राजदूतको बढी देखिराखेको छ । भारत अमेरिकालगायतका कुनै पनि देशको कूटनीतिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग हाम्रो दुई देशीय मामिलामा केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाँहरु (चीन)को राजनीतिक सिस्टम त्यहाँ राम्रो चलेको छ ।
हामीले सबै देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग हाम्रो समस्या आफै सुल्झाउन सक्छौँ । चाहे हाम्रो पार्टी मामिला होस् वा देशभित्रको आन्तरिक विषयवस्तु हुन् भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ । तपाईंहरु मित्र हुनुहुन्छ । यो मित्रता दुई देशको सम्बन्धमा सीमित रहनुपर्छ । त्यो विषयमा छलफल, भेटघाट गर्न सक्छौँ तर आन्तरिक विषयमा चासो राख्न जरुरी छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ । त्यसमा हामी चुकिराखेका छौँ । छिमेकी मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई खुलेआम प्रवेश गराइराखेका छौँ । त्यो राष्ट्रको हितमा छैन ।
त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो देशका बारेमा निर्णय लिनसक्छौँ भन्ने कुरामा शङ्का पैदा गरेको छ । यता हाम्रा प्रधानमन्त्री छिमेकी देशका सम्बन्धमा अनावश्यक अप्रमाणित कुरामा प्रवेश गरिरहनुभएको छ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्ने कुरामा सहयोग गर्दैन ।
छिमेकी मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिको खुलेआम प्रवेशको विषयमार्फत चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो सक्रियतालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ?
हामी सम्मान गर्छौं । हाम्रो राजनीतिक सिस्टमलाई उहाँहरुले सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले कुनै पनि देशका प्रतिनिधिलाई चाहिनेभन्दा धेरै एक्सेस दिने कामले हामीलाई राम्रो गर्दैन । हामी राष्ट्रियता, स्वाभिन, स्वार्थका कुरामा यसले मद्दत गर्दैन ।
यस्ता काम हिजो पनि त भएका थिए । तपाईंहरुले किन रोक्नुसक्नु भएन ? सुरुवात त तपाईंहरुबाट भएको हो नि ?
तपाईंले भनेजस्तो हिजो त तिमीहरुले पनि एक्सेस दिएका थियौ भन्ने कुरा पनि आउँछ । जहाँ मानव अधिकारको अक्रमणमा हुँदा सबै देशको चासो र चिन्ता हुने कुरा विश्वव्यापी स्वीकार्यताको विषय हो । त्यसबाहेकका विषयमा प्रवेश गराउनु कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन ।
कूटनीतिक मापदण्डअनुसार विदेशी नियोगका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई साक्षी राख्नुपर्र्ने हुन्छ । यो किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ?
पहिलो नम्बर त दुर्भाग्यवस हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो संयन्त्रलाई विश्वास गर्दैन । नम्बर दुई, उहाँहरु व्यक्तिगत कुरा कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ ।
उहाँहरुमार्फत सहयोग खोज्नुुहुन्छ । त्यसैले त्यहाँनिर उपस्थिति नगराउने प्रवृत्ति आज मात्र भएको होइन हिजोका दिनमा पनि थिए । यो विषय राष्ट्रले गम्भीर रूपमा सच्याउनुपर्छ । सरकारमा भएका पार्टीले मात्र होइन हामीले पनि यो कुरा सच्याउनुपर्छ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई हामीले राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन । यो कुरामा हामी गम्भीर बनेनौँ भने अन्ततः राष्ट्रिय हितमाथि खतरा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो विषयमा एउटा राष्ट्रिय चिन्तन हुन जरुरी छ ।
हामीले देशसँग सम्बन्ध राख्ने हो, त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली होइन । परराष्ट्र सम्बन्ध पार्टीगत र व्यक्तिगत कुरा होइन भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने देशको हितलाई माथि उठाउँछौँ । जस्तो युरोपमा स्विजरल्यान्ड जस्तो देशलाई विश्वयुद्धमा पनि कसैले छोएन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरुको अर्जुनदृष्टि थियो । त्यसमा उनीहरुले सम्झौता गरेनन् । ठूलो स्वरले चिच्याउने कुराउने काम पनि उनीहरुले गरेनन् ।
सत्तारुढ दलको चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा काँग्रेस सशङ्कित देखिने गरेको छ । त्यस पछाडिको कारण के हो ?
यस्तो होइन । हामी काँग्रेस र कम्युनिस्टहरुले वैचारिक दृष्टिकोणमा एउटा एउटासँग नजिक देखिएको जस्तो अर्को अर्कोसँग नजिक नदेखिएजस्तो व्यवहार पनि छोड्नुपर्छ ।
किनभने हामीले देशसँग सम्बन्ध राख्ने हो, त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली होइन । परराष्ट्र सम्बन्ध पार्टीगत र व्यक्तिगत कुरा होइन भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने देशको हितलाई माथि उठाउँछौँ । जस्तो युरोपमा स्विजरल्यान्ड जस्तो देशलाई विश्वयुद्धमा पनि कसैले छोएन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरुको अर्जुनदृष्टि थियो । त्यसमा उनीहरुले सम्झौता गरेनन् । ठूलो स्वरले चिच्याउने कुराउने काम पनि उनीहरुले गरेनन् ।
त्यसैले गर्दा उनीहरुले आफ्नो सार्वभौम सत्ता पनि जोगाइराखे र विश्वयुद्धमा पनि केही भएन । अहिले पनि समृद्धशाली मुलुकका रूपमा रहेको स्विजरल्यान्डमा प्रतिव्यक्ति आय युरोपमै उच्च छ । एसियन शताब्दी भन्नेबेलमा नेपाल जस्तो देशले त्यो कुराबाट कसरी फाइदा उठाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मन, कर्म र व्यावहारिक रूपमा सुजबुज पूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता प्रोटेक्ट गर्ने हो । हामी मिलेटरी पावर होइन कि हामीले मिलेटरी च्यालेन्ज गर्ने कुरा हो ।
तर सत्तारुढ पार्टी कहिले भेनेजुला काण्ड, कहिले काश्मीर काण्डमा जोडिन पुग्छ । यसले हाम्रो कूटनीतिक मामिलामा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्छ ?
यसले हाम्रो हित गर्दै गर्दैन । हामीले देश अनुसारको नीति लिन खोज्दैछौँ । एउटा देशको सम्बन्धमा एउटा मापदण्ड, अर्को देशको सम्बन्धमा अर्को मापदण्ड खतरनाक कुरा हो । हामीले अलग अलग मापदण्ड बनाउनुहुँदैन । एउटै मापदण्डबाट चल्यो भने कसैले प्रश्न उठाउँदैनन् ।
के सरकार यतिबेला एउटै मापदण्डअनुसार अगाडि बढेको छ ?
त्यो देखिराखिएको छैन । जस्तो हामीले विदेशी सहयोगमा ऋिण लिए हुन्छौँ । ऋिण लिँदा पनि हामी त्यही देशको ठेकेदार स्वीकार गर्छौँ । त्यही देशको सामग्री, कर्मचारीलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ । तर अमेरिकाबाट अनुदानमा आइराखेको एमसीसीको रकमा सम्बन्धमा सत्ताधारी दलभित्र आफै बोक्सी आफै झाँक्रीजस्तो प्रवृत्ति देखापरेको छ । यो फरक मापदण्ड हो । हामीले फरक मापदण्ड गर्नु हुँदैन । हिजो हामीले तय गरेको मापदण्डले हाम्रो देशको सर्भिस नगरेको ठाउँमा चेन्ज गर्यौँ । ऋिण लिने तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार नहुने भन्ने कुरामा सुधार गरौँ । तर भोलि त्यो मापदण्ड सबै ठाउँमा समान रूपले लाग्ने गरेर गरौँ । त्यसै हामीले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा प्रवेश दिने कुरामा कुनै पनि देशसँग फरक फरक मापदण्ड नअपनौँ ।
पार्टीको विचारधारा नमिल्ने देशसँग निहुँ खोज्ने गरी प्रस्तुत हुनेले राम्रो हुँदैन । यो कुरामा सरकार एकदमै चुकेको छ । पछिल्लो समय त उहाँहरु सत्ता सङ्घर्षका कारण एउटा एउटा फन्डा सिर्जना गर्न लागिरहनु भएको छ ।
यस्ता बेतुकका कुरा गर्नुभन्दा नेपालका सबै राजनीतिक दलले हाम्रो कोर राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? त्यसको पहिचान गरौँ र त्यसको आधारमा हामीले समान दृष्टिकोण बनाऊँ । त्यसले देशको हित गर्छ । देशको हित गर्ने कुरा हामी सबैको हित गर्ने कुरा हो । यसमा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीले यस्ता फन्डा सिर्जना गर्नुको पछाडि कुन मानसिकताले काम गरेको जस्तो लाग्छ ?
लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी मामलामा भारतको दृष्टिकोण र त्यहाँको मिडियाको प्रचारको शैलीबाट नेपाली जनता रिसाएका छन् ।
मैले अरू विषय प्रवेश गरे पनि आन्तरिक रूपमा राजनीतिक फाइदा हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भएको होला । तर नेपाली जनता हाम्रो राष्ट्रिय हित जोडिएको विषय प्रस्ट रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्थामा छन् । कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो भएको प्रमाण छ । त्यसमा साथ दिए । जुन कुराको प्रमाण पनि छैन । अनावश्यक कुरा गरेर हाम्रो सम्बन्धलाई विषाक्त पार्न खोजियो भनेर जनताले बुझेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति कसैले पनि राम्रो मानेको छैन ।
अहिलेको मुख्य समस्या कहाँनिर देख्नुभएको छ ?
हाम्रो नेतृत्वले छिमेकी देश, मित्र राष्ट्रसँग आधारसहित प्रस्ट रूपमा आफ्नो कुरा राखियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ भन्ने मेरो अनुभव छ ।
जस्तो डुबानको विषयमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारत नेपाली संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेर त्यसको समाधान गर्ने कुरा मैले प्रस्ट रूपमा राखेका थिएँ । सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन भएन भनेर पनि मैले कुरा राखेँ । गण्डक सम्झौतमा हामीले पाउनुपर्ने कुरा पनि नपाएको विषयमा पनि कुरा उठाएको थिएँ ।
यस्तै महाकालीबाट कञ्चनपुरतिर नहर आउनुपर्ने सम्झौता भए पनि आएको थिएन । त्यसमा पनि उहाँहरु सहमत हुनुभयो । बोर्डरको समस्या पनि छिटोचन्दा छिटो टुङ्ग्याउने भनेर सहमति भयो । प्रस्ट रूपमा प्रमाणसहित प्रस्तुत भयो भने उहाँहरुले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चीनकै विषयमा बीआरआई पहिला आयो । त्यसमा हाम्रो हित हेरर मात्र प्रस्ताव राख्ने आएको थिएन । त्यसमा ६ महिनाको अध्ययनपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । त्यतिबेला प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव खल्तीमा राखेर बसेको छ भने । तर मैले त मेरो देशको हित हेरेर काम गर्ने हो ।
आफ्नो देशको हित र स्वार्थको ग्यारेन्टी नभएसम्म हस्ताक्षर गर्ने कुरा थिएन । त्यसमा धेरै छलफल भयो । पछि हामीलाई पनि ठीक छ भन्ने लाग्यो र हामीले हस्ताक्षर गर्यौँ ।
हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा गम्भीर सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै देशको नेता रिसाएर मेरो कुर्सी जान्छ कि भनेर हामीले काल्पनिक रूपमा आफूभित्र डर पाल्यो भने राष्ट्रको हितमा काम हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थलाई पन्छ्याए गर्ने हो भने काम गर्न सकिन्छ ।
क्वारेन्टिन केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म सरकारको ध्यान पुगको पाइएन । काठमाडौँकै टेकु अस्पतालमा अहिलेसम्म मन्त्री सचिव र डिजीसम्मले प्रवेश गरेका रहेन छन् । हामी त्यहाँ गएर अन्तरक्रिया गर्यौँ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि, स्थानीय तह र आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुसँग पनि निरन्तर अन्तत्र्रिmया गरिराखेका छौँ । त्यसक्रममा क्वारेन्टिनमा सबैभन्दा जोखिम देखिएको पाइयो । मापदण्डअनुसार भएनन् ।
अब कुराकानीको प्रसङ्ग बदलौँ । काँग्रेसले तपाईंको नेतृत्वमा कोभिड–१९ अनुगमन समिति बनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबारे तपाईंले अनुगमन पनि गर्नुभयो । महामारीको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
यसमा सरकार जिम्मेवार पाएनौँ । क्वारेन्टिन केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म सरकारको ध्यान पुगको पाइएन । काठमाडौँकै टेकु अस्पतालमा अहिलेसम्म मन्त्री सचिव र डिजीसम्मले प्रवेश गरेका रहेन छन् । हामी त्यहाँ गएर अन्तरक्रिया गर्यौँ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि, स्थानीय तह र आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुसँग पनि निरन्तर अन्तत्र्रिmया गरिराखेका छौँ । त्यसक्रममा क्वारेन्टिनमा सबैभन्दा जोखिम देखिएको पाइयो । मापदण्डअनुसार भएनन् ।
त्यसमा केन्द्र सरकारको योगदान न्यून देखियो । सम्भव भएसम्म स्थानीय सरकारले केही गरेका छन् । केही प्रदेशले सहयोग गरेको छ । त्यही आधारमा यो चलेको छ । केन्द्र सरकारले यसका लागि १० अर्ब देखाएको छ । त्यो पैसा सही रूपमा सदुपयोग भएको भए यतिबेला हामी कोरोना नियन्त्रण गरिसक्थ्यौँ । सरकार त्यसमा पूरै चुक्यो । सोच्नु पनि पाप हुनेबेला सरकार भ्रष्टाचार गर्नतिर लाग्यो ।
सरकारले लकडाउन लगाउने एउटै काम मात्र गर्यो । अहिले १०औँ लाख बेरोजगार छन् । विदेशबाट पनि ५ लाख बेरोजगार भएर आइसकेको अवस्था छ ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो । साना मझौला व्यवसायी बाँच्नुपर्यो । त्यो बचाउनेतर्फ बजेट पनि आएन । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर भनेर भनौँ ।
अनुगमनपछि सरकारका कमजोरी देखाउने प्रयास त गर्नुभयो । यो सरकारले कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्छ भन्नेमा तपाईंको निष्कर्ष के हो ?
हामीले जति होसियारी, खबदारी गरे पनि उहाँहरु सच्चिराख्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्री बेसार खाऊ, हाच्छिउँ गर भन्ने अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यो सरकारबाट धेरै आश छैन ।
तर सत्तारुढ पार्टीभित्र सरकार विकल्प खोज्छु भनेर लागेका नेताहरुको रवैया पनि ओलीजी तपाईं मात्र बस्ने, हामी बस्नुपर्यो नि भन्ने विषयमा धेरै केन्द्रित भएको पाइयो । तर कुनै इस्युलाई बेस बनाएर उनीहरुले बहस गरेको पाइँदैन ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईं असफल हुनुभयो । त्यसलाई सफल पार्न हामी आउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा उठेको छैन । तर हामी अहिले सत्तामा जाने सोचमा छैनौँ । सरकारको विकल्प दिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
कोरोना महामारीले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ । पार्टी सभापतिजी महाधिवेशनलाई टार्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धी नेताहरुलाई लाग्यो कि उहाँले टार्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भनेर । ‘उहाँले प्रस्ट भन्नु भयो । म टार्न इच्छुक छैन । महाधिवेशन गर्न सकिन्छ गरौँ ।’
सरकारसँगै सत्तारुढ दल पनि यस विषयमा असफल सिद्ध भएको तपाईंको निष्कर्ष हो ?
यसमा कम्युनिस्ट पार्टी नै तानियो । त्यहीभित्र विकल्प छ नि भन्ने कुरा भएन । त्यसले मुलुकमा निराशा पैदा गरेको अवस्था छ ।
कुराकानीको अन्तिममा काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पनि जोड चाहेँ । कोरोना महामारीका बीच काँग्रेस आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न तम्सिएको अवस्था छ । त्यो कति सम्भव छ ?
बुधबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिले महाधिवेशन गर्ने नियतका साथ अगाडि नआएको निष्कर्ष निकालेको छ नि ?
निर्णय गर्दा पनि उहाँकै नियत खराब देख्ने ? केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएपछि सभापतिजीले ‘रामचन्द्रजी यसको कार्यान्वयन गर्न संयोजकन नै तपाईं बन्नुहोस्’ भनेर प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो ।
म बस्दिनँ, तपाईंले नै गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो । सभापतिजीबाट त्योभन्दा अर्को कुरा भन्ने ठाउँ छैन । अविश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन । हामी सबैको पहलले अधिवेशन अगाडि बढ्न कठिन हुँदैन । सबैको प्रयासले हुने कुरा हो । सभापतिजीलाई मात्र गर्न नचाहेको भन्न मिल्दैन ।
आगामी महाधिवेशनमा तपाईंको कुन पदमा उम्मेदवारी रहन्छ ?
म सहमहामन्त्री भइसकेको छु । त्योभन्दा माथि जान्छु भनेर दाबी नराख्नुपर्ने केही कारण छ्रैन । तर केही नेताहरु जस्तो अहिले नै डम्फु बजाएर हिँड्न आवश्यक पनि छैन । नचिनेको नेता र नचिनेको कार्यकर्ता छैन, कुन पदमा उम्मेदावर बन्ने भन्ने कुरा उपयुक्त समयमा भन्छु नै । विद्यार्थी कालदेखि सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइएको हो ।
केपी ओली गणतन्त्र विरोधी हुन्, प्रचण्ड पनि संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्
नियमित सेवा अवरुद्ध हुँदा पैदा भएका स्वास्थ्य समस्याहरू गम्भीर चुनौती हुन्
कोरोनाको कहरले गर्दा पीडकसँगै बस्न बाध्य छन् कतिपय महिला
‘अब पनि प्रभावकारी ढङ्गले जान सकेनौँ भने देशमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ’